Baahida loo qabo Pixel ma gaarto tobnaad kan iPhone 7 | Wararka IPhone
Dhibaatooyinka Pixel: dalabkoodu ma gaadhayo toban meelood meel ka mid ah iPhone 7
Markay Google soo bandhigtay noocyadeeda cusub PixelWuxuu u sameeyay si weyn, isagoo ku andacoonaya inay tahay tan ugu fiican ee aan iibsan karno, isagoo sheegay in kamaradiisu ay tahay tan ugu fiican ee laga heli karo taleefanka casriga ah, isla markaana sidii caadada u ahaydba, waxay qiimeynaysaa iPhone 7, oo ah laba taleefan oo ay Apple soo saartay bil ka hor. Pixels wuu fiicnaan karaa sida Google u muuqato, laakiin waa inaad taqaanaa sida loo iibiyo badeecadaha waxayna u muuqataa in taleefannada casriga ah ee "ugu horreeyay" (aysan cidna doqon ka ahayn) shirkadda matoorka raadinta waxay la daalaa dhacayaan sidii ay meel ku heli lahaayeen suuqa
Sida laga soo xigtay Best Buy, dukaan kaliya lagu iibiyo 32GB Pixel phones, baahida loo qabo taleefanka Google maaha toban meelood meel kamida iPhone 7. Dhibaatadan ayaa laga yaabaa inay gacan ka gaysatay shirkadda hadda qayb ka ah Alphabet iyada oo hoos u dhigaysa qaab 5.5 inji ah oo ah 'XL' oo hadda gabaabsi ah. Waxay sidoo kale u muuqatay in la dhayalsaday qaab 128GB ah oo aan kayd ahayn tan iyo Nov. 30, laga bilaabo in ka badan bil iyo badh ka hor. Xaqiiqdii, Verizon waxay siineysaa waqtiyo gaarsiin ah usbuuca labaad ee Maarso, waxba ma jiraan.
Google wuxuu la halgamayaa inuu ilaaliyo Pixels-kiisa
Waxaan ka warqabnaa arrimaha kaydinta ee Google Store iyo Verizon. Si daacadnimo ah, dalabku wuu dhaafay wixii aan ka filaynay. Waxaan sameyneynaa wax walba oo aan kari karno si aan dib ugu dhisno saamiga si joogto ah.
Ereyada kor ku xusan, oo ka socda afhayeenka Google, waxay ka duwan yihiin kuwa a isha ka Apple Insider oo ka socota gudaha Best Buy oo leh:
Baahida loo qabo Pixel-ka xitaa toban meelood meel kamida iPhone 7-ka, waana ku dhowaanay mala awaalkeena. Laakiin wali waan dhayalsaneynaa dalabka.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, sida horeyba loogu soo sheegnay saamiga suuqa ee 2% ee ay gaareen AirPods bishii ugu horreysay ee iibka, Caddaalad noqon mayno haddii aynaan ku qiimeynin qiyaasta saxda ah in dadku weydiistaan ​​hal Pixel tobankii iPhoneba 7. Xaqiiqdii, waa wax ka badan intii ay ku gorgortameen Best Buy. Sideed u aragtaa tirooyinkan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Dhibaatooyinka Pixel: dalabkoodu ma gaadhayo toban meelood meel ka mid ah iPhone 7
Isbarbardhigga iibinta taleefannada casriga ah ee adeegsada Android OS ee ka soo horjeeda iOS waa caddaalad darro. IOS kaliya waxay leedahay hal khadka taleefanka gacanta: iPhone. Android OS wuxuu leeyahay moodooyin badan oo kala duwan, waana sababta ay dadka reer Android ugu baahan yihiin inay u kala qaybiyaan macaamiisha.
Ayaan (@ayaan_ayaan) dijo
Xusuusnow meesha aad isbarbardhiga ka sameyneyso: adduunka oo dhan - Google uma qeybiyo moodellada ay wadato dhammaan waddammada Apple (gaar ahaan waxaan ka hadlayaa Mexico, waxaan rabaa in aan iibsado qalabka Google oo iyagu lama heli karo) ama heerka hal wadan oo ay labada kooxba iib yihiin (haddii muunada ay tahay USA, markaa horey ayaan uga hadli karnaa isbarbardhig)
U jawaab karen (@karenvaldis)
Marka ma jiraan wax keyd ah, dadku waxay rabaan inay iibsadaan Pixel laakiin wax ku filan ma aysan sameyn.
Laakiin daabacaadaha ku nool taageerayaasha Apple waxay leeyihiin waxa aan jirin waa dalab, dabcan.
Sida muuqata Apple ma awoodo inay iibiso midkood iphone sanadkii hore ... sidoo kale midkaan, oo wax soo saarkiisa horey loo qasbay ...
Marka: qof kastaa ha ka fikiro wuxuu doonayo.
Waqtigii Apple wuu dhaafay.
Jawaab A. Vázquez
Waa salaaman tahay, A. Vázquez. Waa iibsiga ugufiican ee sheegaya in dalabku hooseeyo.
Isbedelada ku imanaya Apple News; casharka naqshadeynta sidoo kale wuu fiicnaanayaa
Apple waxay siideysaa macruufka cusub ee IOS 10 Naqshadeynta Sawirka iyo Photoshop